Iindaba -I-Xieyanshi Abrasives ibambisene neComac!
IXieyanshi Abrasives ibambisene neComac!
Siyavuyisana nale ntsebenziswano. Emva kothethathethwano olude kunye nohlolo, iShanghai Xieyanshi Abrasives ekugqibeleni yadlula kwiCOMAC'S (ICandelo lezoShishino ngeeNqwelo moya laseChina Ltd) kuvavanywa ngokungqongqo kwaye kungqinisiswe, babe ngabanikezeli abathembekileyo. Kholelwa iXIEYANSHI iya kuba nentsebenziswano enzulu kunye nabo kwi-abrasives-A720T, B322, L911 njl.
Umnumzana u Chen, umongameli we Xieyanshi abrasives, utyikitye nje ikhontrakthi ne COMAC kwi CIIE (tHE 3RD China International Expo Expo)
(Mnu Chen, uhleli ecaleni kwenenekazi elipinki.)
ICorporate Aircraft Corporation yase China, Ltd. (COMAC) isebenza njengeyona moto iphambili ekuphumezeni iinkqubo ezinkulu zeenqwelomoya e-China. Kukwanikwe igunya lokwenza izicwangciso zomgaqo-nkqubo wenqwelomoya kunye neenkqubo zejeti zengingqi kunye nokuqonda ukwenziwa kweenqwelo moya zase China. I-COMAC izibandakanye kuphando, ukwenziwa kunye nokuvavanywa kwenqwelomoya yenqwelomoya kunye neemveliso ezinxulumene noko, kunye nokuthengisa, ukuhambisa, ukuqeshisa kunye nokusebenza kweenqwelomoya.
I-Shanghai xieyanshi Abraisves Co Ltd (i-XYS) ingumenzi wobuchwephesha wee-abrasives, iimveliso zisetyenziswa ngokubanzi kwiZithuthi, inqwelo moya, ukusebenza ngomthi ... umgangatho kunye neenkonzo zihlala zibeka phambili.
Wamkele nayiphi na imibuzo okanye isicelo seesampulu kuwe. Pls zive ukhululekile ukunxibelelana nathi ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngeemveliso zethu.